Uhlalutyo lwe-BSF Maggot Cultivation - I-Small to Scale Scale
Uhlalutyo loshishino lokuhlakulela izilwanyana ezingenasiphelo
Uhlalutyo lwe-Odorless Maggot Cultivation - Ngokwenza uhlalutyo lokulima okungenasiphelo, into ebalulekileyo yokuqwalasela ihambelana nezinto ezisetyenziswayo. Kuhlalutyo lwe-BSF ukuhlaziywa okanye ukuhlaziywa kweenkomo, oku kuluhlu olutshisayo olusetyenziswayo yintsikelelo yezinto eziphilayo, i-waste factory kunye nomgquba. Ezinye izinto ezibalulekileyo kukuhlalutya kwe-BSF ukulima, oko kukuthi
1. Izinto ezirhwexayo
Into yokuqala yokuhlalutya ukulima kwe-BSF ikhetha izinto ezibonakalayo. kunye nento esiyikhethayo yintengiso engcolileyo, ngokuqhelekileyo inkunkuma yendalo ayinayo ibalulekileyo yezoqoqosho kwaye ihlala ilahliwe. Ukongezelela, okwangoku ubukho balo buxubusha ukuxuba kunye nenkunkuma engafaniyo.
Ngoko ke, ukuze ufumane izinto ezibonakalayo zokuveliswa kwezinto ezibonakalayo, kuyimfuneko ukuzama ukuhlalutya inkunkuma engcolileyo. Umbuzo kukuba, ngaba abalimi bangenza ngokwabo?
Ukuhlenga inkunkuma yezinto eziphilayo kufuneka kwenziwe ngokweenkqubo, zombini kunye nemibutho yoluntu kunye noorhulumente wengingqi. Ukuba ngaba kunzima ukuphumeza le nyathelo, abalimi banokusebenzisana kunye namashishini okutya anexabiso elikhulu lokutya kwenkunkuma.
Ngokuqhelekileyo, ubukho bemfuyo yabo buhlukaniswe kakuhle. Abaqulunqi kufuneka babale ubukhulu benkunkuma engcolileyo ekwazi ukulawulwa ngokuqhubekayo ukwenzela ukuba isondo leshishini likwazi ukusebenza kakuhle.
2. Icandelo labathengi
Isibini sesibini ekuhlalutheni kwe-BSF ukuhlalwa ngumxhasi. Icandelo lokuvelisa umbane lenza umzamo wokubonelela ngemithombo yamaprotheni eminye yeentlanzi kunye nokutya kwemfuyo ngeendleko eziphantsi ngenxa ye-bioconversion yenkunkuma.
Ukuba umgudu wokuvelisa ukhankanywe ngokufaka indawo encinci yokutya kweentlanzi kwi-intlanzi okanye kumashishini okutya emfuyo, kuya kuba nefuthe elikhulu kulo shishino.
Ngenxa yokuba intengo yesidlo seentlanzi unyaka unyaka uye wanda. Ngaphandle koko, ubukho bemagot buba nefuthe ngqo kwiifama kunye nemfuyo. Ziyakwazi ukuvelisa ezinye iiprotheni ngokuzimeleyo ukwenzela ukunciphisa iindleko zokuvelisa.
Amanye amaqela aya kuvuyela umkhiqizo kule nkqubo ye-bioconversion yintyatyambo kunye neziqhamo zamasimi, ngenxa yokubonelelwa ngamagqabi aphezulu.
3. Uhlobo lo shishino
Uhlalutyo lwesithathu lwe-BSF ukulima luhlobo lwezoshishino eziza kwenziwa. Kukho ezimbini iintlobo zamashishini okuvelisa umbane ogqityiweyo.
Uhlobo lokuqala luyimashishini azimeleyo, okubandakanya amafama okanye amafama asentlanzi avelisa i-magot ukuhlangabezana neemfuno zabo
Uhlobo lwesibini luhlobo lweshishini kunye nomzekelo webambiswano lobambiswano lweplasma. Iprojekthi ye-Plasma nucleus yobambiswano yifom yefesimali efanelekileyo kakhulu kwimveliso yamagot apho indawo (ingundoqo) iya kuba njengabavelisi beqanda be-BSF.
Isikhundla se-plasma sinendima ekukhuliseni umlenze (ukuguqulwa kwenkunkuma engcolileyo) enokuthi yenziwe kwiinqununu zonyango lwenkunkuma, izindlu, njalonjalo.
I-magot ekhutshwayo yabuyiselwa kwakhona ngundoqo ukuze iqhutywe phambili ibe ngumgubo wamagotane okanye iipelisi zorhwebo.
4. Ishishini soShishino
Ukulima kweMaggot kuyahlukana kwiinkalo ezintathu zeshishini, oko kukuthi
Ukulima kweMaggot yokuqala
Isiqhamo seMaggot esiPhakathi
Kucinga ukuhlalutya kweenkomo ze-maggot njengeentlanzi kunye nokutya kweenkukhu. Uhlalutyo lwesilwanyana semfuyo ukuvavanya izibonelelo ezifunyenwe kwimisebenzi yokulima umlingo. Iziphumo zolu hlalutyo ngokuqinisekileyo ziyisiseko sokuqwalasela ngaphambi kokuqala ishishini
Iintlobo zoshishino loPhuhliso
Iintlobo ezizimeleyo zeqanda kunye nokuveliswa kwemagot zithengiswa njengentlanzi kunye nokutya kwemfuyo, ngaphandle komzamo wokuvelisa iipelisi okanye ukuthungwa kwemaggot. I-teknoloji ityathwa ngokuphumeleleyo luluntu ukuba izalisekisa ezi zinto zilandelayo zintathu
Iinkalo ze-Biological kunye nokuveliswa kwezilwanyana ngokuziphathekayo ziye zazi kakuhle
Ngokwenene, iteknoloji ingasetyenziswa
Uqoqosho lungaba luncedo
Uhlalutyo lwezoshishino luhlobo lokubalwa kwemali ukufumanisa ixabiso lentengo okanye utyalo-mali olufunekayo ekusebenzeni ishishini, kwaye ukuchonga ukukhangela kweshishini. Ezinye zezibalo ezifunekayo kuhlalutyo loshishino
Ukwamkelwa kunye nomlinganiselo
Ixabiso (r / c ratio)
Iphulo-yeyona nxalenye / bep) kwaye
Ukuba umlinganiselo we-R / C ukhulu kune-1, ishishini lingafezekisa ukuqhuba, kwaye ngokulandelelana.
Ubungakanani bolu hlobo loshishino luya kuvavanywa ukusuka kwinqanaba le-five investment investment.
Ixabiso elikhoyo langoku (NPV)
Ixabiso lentlawulo yenzuzo (Net B / C)
Intlawulo yangaphakathi yokubuyisela (IRR)
Ixesha lokuhlawula (PBP)
Phula uze ukhombe (BEP)
Utyalo-mali olufunekayo ekuveliseni umtshini luquka izakhiwo ze-insectarium, i-larvarium, uomatshini bokubala udoti, uomatshini bokushicilela, kunye ne-trolleys. Iinguqu kwiindleko ezingagqibekanga
Iindleko zothutho zokuthuthwa kwenkunkuma,
Ixabiso lekhekhe yeoli, kunye
A. Ukusetyenziswa kweCandelo loHlolo loShishino loHlolo
Ukuhlalutya le nkomo yeemvu, kucingwa ukuba insectarium yakhiwe kwindawo ye-2 m2 kunye ne-larvarium ehlanganisa indawo ye-3 m2
Isixa senkunkuma esetyenziswayo yi-200kg / imini
I-Magot eveliswe yi-10% yezinto ezibonakalayo. Oko kukuthi, ukuveliswa kwemagot yi-20 kg / ngosuku
I-magot efunyenweyo isetyenziselwa ukuveliswa kwe-pupa okanye inambuzane kangangoko i-15%, ngelixa elinye i-85% ithengiswa kwi-aquaculture industry
Intengo yokuthengisa yamagot iRp7.000 / kg
Ixabiso lokuthengisa isichumiso se-organic from process bioconversion yiRp1.000 / kg.
Ukuhlaziywa kweMaggot Ukuhlaziywa kwezilwanyana - Iinkcukacha zeNdleko zoTyalo-mali kunye neMisebenzi yokuvelisa iMagot
Iindleko zepropati zoPhuhliso
Iindleko zepropati zepropati ezenziwayo ekuveliseni umveliso wamagosa ngonyaka omnye
Iindleko zemiSebenzi yeeNkcitho = Iindleko eziHlomelo + zeNdleko ezingezantsi
Intlawulo Iyonke Ngonyaka
Ingeniso yonyaka ngonyaka = Imveliso epheleleyo yamagot (kg) Ixabiso lentengiso ye-magot (Rp)
= (20kg / ngosuku X Rp7.000) X 85% X (iintsuku ze-365 - iiveki ze-52) = Rp43.435.000
Ixabiso leenzuzo ezifunyenwe kwishishini lokuvelisa linokubalwa ngokusebenzisa le ndlela elandelayo.
Inzuzo (Rp) = Imali epheleleyo yeNgeniso (Rp) - Ixabiso leNdleko yoPhuhliso (Rp)
Amandla Amashishini Aphakathi
Ngokusekelwe kwicandelo lohlalutyo loshishino olungentla, ubuchule boshishino lokuvelisa imothanti lunokumiselwa ngolu hlobo lulandelayo:
1. BEP (Phula ngisho nePoint Point)
UkuPhula nePaint Point (BEP) kwiiNyunithi
I-BEP: Phula nePain Point
IFC: Iindleko eziHlomelo
VC: Iindleko eziguqukayo
P: Ixabiso ngeyunithi
S: I-Volume Volume
UkuPhula KwePhuzu (BEP) kwiRupiah
Iindleko eziHlomelo kunye neendleko ezingapheliyo ngekg
Iindleko eziQinisekileyo = I-Intlawulo yeNdleko / i-Unit Unit = 120.000 / 6.205 = 19 Kg
Iindleko ezingagqibekanga = Iindleko ezingapheliyo / Izakhono zokuvelisa = 1.850.000 / 6.205 = 298 Kg
Iindleko eziQinisekisiweyo / (Intengo yokuThengisa nge-Kg - Iindleko ezixhasayo nge-Kg) = 120.000 / (Rp7.000 - 298Kg) = 18 Kg
Iindleko eziQinisekisiweyo / i-1- (Iindleko eziPhezulu / Intengiso) = 120.000 / 1- (1.850.000 / 43.435.000) = Rp125.338
Ikhefu-nokuba yinto ekhokheni yi-18kg. Oku kuthetha ukuba kula manani ayinakunceda kwaye ayilahleki.
Ikhefu-nokuba yinto ephilileyo kwiRp125.338
2. Ukubuyiswa koTyalo-mali (ROI)
I-ROI = (Inzuzo / Iindleko Zemveliso Yonke) x100% = Rp43.435.000 / 1.920.000 = 2.262,24%.
3. Imali yeRhafu yeRhafu (R / C)
Ubungakanani boshishino lokuvelisa umgangatho ophakathi luya kuhlolwa ngolu hlobo lulandelayo,
R / C = Inkcitho (Rp) / Ixabiso leMveliso yoRhwebo (Rp) = Rp43.435.000 / Rp1.920.000 = 22,62
Inani le-R / C elitholwe yi-22,62 okanye ngaphezulu kwe-1. Eli nani libonisa ukuba ishishini lokuvelisa imveliso yamagot liyakwazi ukuqhuba.
4. Ixesha lokuhlawula (PBP)
Ukubala kwexesha lokubuyisela kulindeleke ukuba likwazi ukuhlalutya ixesha lokubuyiswa kwezobalo-mali ze-sakla magot yokuvelisa ishishini kunye neendlela ezilandelayo:
I-PBP (inyanga) = Utyalo-mali opheleleyo (Rp) / Inzuzo yokuSebenza (Rp) x 1 ngonyaka = (1.100.000 / 41.515.000) x 12 inyanga = inyanga ye-0,3.
Iziphumo zolu hlalutyo zibonisa ukuba yonke inkunzi-mali yokuveliswa kwamashishini okuvelisa i-magot iza kubuya ngexesha leenyanga ze-0,3.
B. Ukuxhaswa kweNkcazo yoShishino lwaBancinane
Ukuhlalutya le nkomo yeemvu, kucingwa ukuba insectarium yakhiwe kwindawo ye-100 m2 kunye ne-larvarium ehlanganisa indawo ye-100 m2
Isixa senkunkuma esetyenziswayo yi-500kg / imini
I-Magot eveliswe yi-10% yezinto ezibonakalayo. Oko kukuthi, ukuveliswa kwemagot yi-50 kg / ngosuku
= (50kg / ngosuku X Rp7.000) X 85% X (iintsuku ze-365 - iiveki ze-52) = Rp108.587.500
Iindleko eziQinisekileyo = I-Intlawulo yeNdleko / i-Unit Unit = 32.050.000 / 15.513 = 2.066 Kg
Iindleko ezingagqibekanga = Iindleko ezingapheliyo / Izakhono zokuvelisa = 9.900.000 / 15.513 = 638 Kg
Iindleko eziQinisekisiweyo / (Intengo yokuThengisa nge-Kg - Iindleko ezixhaswe nge-Kg) = 32.050.000 / (Rp7.000 - 638 Kg) = 5.038 Kg
Iindleko eziQinisekisiweyo / i-1- (Iindleko eziPhezulu / Intengiso) = 32.050.000 / 1- (9.900.000 / 108.587.500) = Rp35.265.149
Ukuphuka-kwinqanaba le-kg yi-5.038 kg. Oku kuthetha ukuba kula manani ayinakunceda kwaye ayilahleki.
Ikhefu-nokuba yinto ephilileyo kwiRp35.265.149
I-ROI = (Inzuzo / Iindleko Zemveliso Yonke) x100% = Rp108.587.500 / 40.450.000 = 268,45%.
R / C = Inkcitho (Rp) / Ixabiso leMveliso yoRhwebo (Rp) = Rp108.587.500 / Rp40.450.000 = 2,68
Inani le-R / C elitholwe yi-2,68 okanye ngaphezulu kwe-1. Eli nani libonisa ukuba ishishini lokuvelisa imveliso yamagot liyakwazi ukuqhuba.
I-PBP (inyanga) = Utyalo-mali opheleleyo (Rp) / Inzuzo yokuSebenza (Rp) x 1 ngonyaka = (17.750.000 / 68.137.500) x 12 inyanga = inyanga ye-3.1.
Iziphumo zolu hlalutyo zibonisa ukuba yonke inkunzi-mali yokuveliswa kwamashishini okuvelisa i-magot iza kubuya ngexesha leenyanga ze-3.1.
B. UkuThatyathwa koPhando oluPhakathi lweShishini
Kuhlalutyo lwenkomo yeemvu, kucingwa ukuba insectarium yakhiwe kwindawo ye-400 m2 kunye ne-larvarium ehlanganisa indawo ye-400 M2
Isixa semveliso engasetyenziswayo yi-3 tons / imini
I-Magot eveliswe yi-10% yezinto ezibonakalayo. Oko kukuthi, ukuveliswa kwemagot yi-300 kg / ngosuku
= (300kg / ngosuku X Rp7.000) X 85% X (iintsuku ze-365 - iiveki ze-52) = Rp651.525.000
Iindleko eziHlomelo = Iindleko eziHlomelo / Abasebenzi bokuvelisa = 120.300.000 / 93.075 = 1.293Kg
Iindleko ezingagqibekanga = Iindleko ezingapheliyo / Izakhono zokuvelisa = 26.700.000 / 93.075 = 287 Kg
Iindleko eziQinisekisiweyo / (Intengo yokuThengisa nge-Kg - Iindleko ezixhasayo nge-Kg) = 120.300.000 / (Rp7.000 - 287Kg) = 17.920 Kg
Iindleko eziQinisekisiweyo / i-1- (Iindleko eziPhezulu / Intengiso) = 120.300.000 / 1- (26.700.000 / 651.525.000) = Rp125.440.655
Ikhefu-nokuba yinto ekhokheni yi-17.290kg. Oku kuthetha ukuba kula manani ayinakunceda kwaye ayilahleki.
Ikhefu-nokuba yinto ephilileyo kwiRp125.440.655
ROI = (Inzuzo / Ixabiso leNdleko yokuvelisa) x100% = Rp651.525.000.000 / Rp139.500.000 = 467,04%
R / C = Inkcitho (Rp) / Ixabiso leMveliso yoRhwebo (Rp) = Rp651.525.000 / Rp139.500.000 = 4,67
Inani le-R / C elitholwe yi-4,67 okanye ngaphezulu kwe-1. Eli nani libonisa ukuba ishishini lokuvelisa imveliso yamagot liyakwazi ukuqhuba.
I-PBP (inyanga) = Utyalo-mali opheleleyo (Rp) / Inzuzo yokuSebenza (Rp) x 1 ngonyaka = (246.500.000 / 512.025.000) x 12 inyanga = inyanga ye-5,8.
Iziphumo zolu hlalutyo zibonisa ukuba yonke inkunzi-mali yokuveliswa kwamashishini okuvelisa i-magot iza kubuya ngexesha leenyanga ze-5,8.